September 30, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 4
MUQDISHO(P-TIMES)- 5 Kursi oo ahaa tiradda udambeysa xubnaha Aqalka Sare ee kasoo jeeda Somaliland ayaa lagu doortay magaalada Muqdisho, waxay ka dhigaysaa tiradda guud ee xubnaha Aqalka Sare ee hadda diyaarka ah 45 xubnood, taas oo ka dhigan in ay tahay tiro kooban oo ku hartay dawlad gobaleedyada Hirshabeelle, Gal,mudug & Jubbaland, oo lafilayo in ay todobaadkan dhameystiri doonaan.
Tartanka maanta ayaa kaduwanaa kii shalay, Tanaasulka ayaa badnaa maanta, xubnaha soo baxayna saameyn badan kuma laheyn darafyadii shalay loolamay, Haddii shalay lagu dagaalamay Kuraasta Cabdi Ismaaciil Samatar, Cismaan Dube & Saalax Jaamac, hadda xaajadu wey ka duwanayd, doorashaduna ma gaarin galin dambe.
Kursiga laga filayay tartanka ugu badan ama cuslaa, wuxuu ahaa midka ay ku baratameen gabdhaha kasoo wada jeeda magaalada Berbera, Muna wariye hore ah oo afar sanno soo ahayd Senator iyo Naciima oo abaaheed 20 Sanno soo ahaa wasiir gudaha SL ayaa tartamay, laakiin Naciima ayaa 30 cod ku guuleysatay, halka Muna heshay 13 cod, taas oo ka dhigan Natiijo sare.
Abwaan Qorane, Axmed Maxamed Siciid Cirbad ayaa bilaa tartan kusoo baxay, Siciid Cawke & Deqa Xuseen ayaa ayaa afar sanno oo kale xagsaday Kursigiisa Aqalka Sare, taas oo ka dhigan in ay guul wanaagsan gaareen.
5-ta Kursi ee maanta kasoo baxay Kuraasta Aqalka Saree e Somaliland ayaa ahaa dhammaan xubno saameyn ay ku lahayd Villa Soomaaliya, qaar kamid ah dadka aan la hadalnay ee sida dhaw ula socdana waxay isku raacsan yihiin in ay ahaayeen kuwa mudooyinkii u dambeeyey lagu leexinayay dhanka Villada oo ay mucaaradka qaarkood xataa ka cabsadeen in ay loolan ka sameeyaan.
Sida aan horey u saadalinay 21-kii September, markii lasoo saaray liiska musharaxiinta Aqalka Sare ee Somaliland, hadda waxaa loo kala qaatay shalay, oo ahayd maalin adag.
11-ka Kursi ee gobalada Somaliland ka heleen Aqalka Sare, marka lagu cabiro aragtida guud ee siyaasadda hadda taagan 7 Kursi ayaa martay garabka Mahdi Guuleed oo ku daaban Farmaajo iyo Villadda, Cabdi Xaashi & Madashii Badbaado ee uu katirsanaana ay heleen 2 xubnood oo barax la’a, Durbana Dube & Bilaal-na ayaa la saadalinayaa in ay noqon karaan ugu dambeynta safka Mucaaradka.
BIle jaamac says:
N&N guusheedii ayaa soo dhaw ee Bus cidii banaanka ka taagan inta uusan dhaqaaqin ha soo raacdo
NABAR IYO NAXDIN IS OVER NEVER EVER AGAIN WAAYO SANKAA LAGA WADA QABSADAY CID RABTANA MALEH WAAYO WAA KUDAAFAD, NABAR IYO NOLOL MA JOOGAAN POSITION AY KUSOO LAABTAAN WAAYO DADKA SOOMALIYEED WAY KALA DHINTEEN ISUMANA NOOLO. BAL QIYAAS HADIIBA AY SOO LAABTAAN MABA DHICI KARTEE YAY XAKUMAYAAN? HADAAN MUQDSIHO LAGA RABIN HADAAN PUNTLAND LAGA RABIN, HADAAN JUBALAND LAGA RABIN,GALMUDUG LAGA RABIN, HADAAN KOONFUR GALBEED LAGA RABIN, HADAAN SOMALILAND LAGA RABIN , MA GEDO IYO GARBAHAARAY AYAY XAKUMAYAAN CAQLIGU WAA INUU SHAQEEYAA INI FARMAAJO WAA BAKHTIYAY WAANA URAY EE URKIISA VILLADA HALAGA SAARO.
Faaraxow bal hadda xisaabta noogu noqo waxbaa ka khaldanee.
Waa mare xubnaha dambe waxa majaraha u hayn doona xubnaha maqaawiirta ah ee ka horreeyay,Farmaajona faro madhan ayuu kala hulleelay meesha.
Abwaan Qorane baa laga yaabaa inuu dhankiisa ahaa,waxayse is weydiintu tahay Farmaajo oo xataa haysan taageerada beeshiisa badankeed sidee Ku helayaa codka soomaalida kale????
Waa mar labaade odayga sow khasnaddii dakhliga Rooble kama xil-wareejin??
Carabtii lacagta soo rari jiray ayuu fursad leeyahay,lagana yaabee in Rooble amar Ku bixiyo in lala wareego.
Codka raggaas shaqo tegay ee naftooda u jooga meesha Irir baa iska leh maxaa Farmaajo keenay????
Bal dayaay waakaa duqii sii dabayshaday……